Somaliland oo War xasaasi ah kasoo saartay Hadal kasoo yeeray Safiirkii US – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xukuumadda Somaliland ayaa soo dhaweysay hadalkii dhawaan ka soo yeeray Safiirkii hore ee Dawladda Maraykanka u fadhiyey Soomaaliya Amb. Stephen M. Schwartz ee ku saabsanaa inay Somaliland u qalanto inay dawladdiisu ka furato Qunsilyad.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) oo la hadlay Wargeyska Geeska Afrika ayaa soo dhaweeyay hadalka Safiirkii hore ee Mareykanka, isagoo ku tilmaamay arrintaas mid wanaagsan.
Wasiirka Arrimaha dibedda Somaliland ayaa sheegay in Amb. Stephen M. Schwartz uu qiray in Somalilan meel wanaagsan ay tahay, isla markaana ay ka jirto xasilooni la isku haleyn karo oo ku timid wadashaqeyn.
Ugu dambeyn Wasiir Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa tilmaamay in Somaliland ay ka go’an tahay xoojinta xiriirka kala dhexeeya Beesha Caalamka iyo dalalka kale ee xiriirka la leeyihiin.